I-RFID tag ye-elektroniki yitekhnoloji yokuchonga ngokuzenzekelayo. Isebenzisa imiqondiso yerediyo ukuchonga izinto ekujoliswe kuzo kunye nokufumana idatha efanelekileyo. Umsebenzi wokuchonga awufuni ungenelelo lomntu. Njengombhalo ongenazintambo webhakhowudi, itekhnoloji yeRFID inamanzi kunye nokukhuselwa okungafunekiyo kwemigca engenayo i-barcode, ukumelana nobushushu obuphezulu, ubomi obude benkonzo, umgama omkhulu wokufunda, idatha kwileyibhile inokufakwa ngokufihliweyo, umthamo wedatha yokugcina mkhulu, kwaye ulwazi lokugcina lunokutshintshwa ngokulula. Izibonelelo zeethegi zeRFID zezi zilandelayo:
1. Qaphela ukukrwaqula ngokukhawuleza
Ukuchongwa kwee-tag ze-elektroniki zeRFID kuchanekile, umgama wokuqwalaselwa ubhetyebhetye, kwaye iithegi ezininzi zinokwaziwa kwaye zifundwe ngaxeshanye. Kwimeko yokungabikho kwento egqubuthelayo, iithegi zeRFID zinokuqhuba unxibelelwano olungena ngaphakathi kunye nokufunda okungathinteli.
2. Imemori enkulu yedatha
Esona sithuba sikhulu samathegi e-elektroniki e-RFID zii-MegaBytes. Kwixesha elizayo, inani lolwazi lwedatha ekufuneka izinto luzithwele luya kuqhubeka ukonyuka, kunye nophuhliso lwenethiwekhi yedatha yenethiwekhi ikwandiswa rhoqo ngokweemfuno ezihambelanayo zentengiso, kwaye okwangoku ikumgangatho ozinzileyo wokunyuka. Amathemba ayaqwalaseleka.
3. Amandla okulwa ungcoliseko kunye nokuhlala ixesha elide
Iimpawu zeRFID ziyamelana kakhulu nezinto ezinjengamanzi, ioyile kunye neekhemikhali. Ukongeza, iithegi zeRFID zigcina idatha kwiitshipsi, ukuze zikwazi ukuthintela umonakalo kwaye zibangele ukulahleka kwedatha.
4. Inokusetyenziswa kwakhona
Iimpawu ze-elektroniki zeRFID zinomsebenzi wokongeza ngokuphindaphindiweyo, ukulungisa, nokucima idatha egcinwe kwiithegi zeRFID, eziququzelela ukutshintshwa kunye nokuhlaziywa kolwazi.
5. Ubukhulu obuncinci kunye neemilo ezahlukeneyo
Iimpawu ze-elektroniki zeRFID azikhawulelwanga yimilo okanye ubungakanani, ngenxa yoko akukho mfuneko yokutshatisa umgangatho wokulungisa kunye nokuprinta iphepha lokufunda ngokuchanekileyo. Ukongeza, iithegi zeRFID zikwakhula zibhekisa kwiminaturization kunye nokwahluka ukufaka kwiimveliso ezahlukeneyo.
Iimpawu ze-elektroniki zeRFID ziphethe ulwazi ngombane, kwaye umxholo wedatha ukhuselwe ngegama eligqithisiweyo, elikhuselekileyo. Umxholo awukho lula ukwenziwa, ukuguqulwa okanye ukubiwa.
Nangona iithegi zesiko zikwasetyenziswa ngokubanzi, ezinye iinkampani zitshintshele kwiithegi zeRFID. Nokuba ivela kumbono womthamo wokugcina okanye ukhuseleko kunye nokusebenza, yomelele ngakumbi kuneelebheli zesiko, kwaye ilungele ngokukodwa izicelo kwiindawo apho ileyibhile inzima kakhulu.